Okokufundisa: KDE isitayela sokuqala se-OS | Kusuka kuLinux
Okokufundisa: Isitayela se-KDE Elementary OS
Lokhu okuthunyelwe ebengikulindile isikhathi esithile lapho ngizokukhombisa khona ukuthi ungakuthola kanjani ukubukeka okufana ncamashi i-eOS (aka Elementary OS) en KDE.
Sonke siyakwazi i-eOS, lokho kusatshalaliswa okususelwa ku- Ubuntu 12.04 enokubukeka okuhle kakhulu, okucocekile futhi okulula, okuphefumulelwe ngu OS X. Kepha akubukeki nje kuphela, i-eOS Ibuye inezinhlelo zayo zokusebenza futhi ithuthukise kakhulu.
Ngingajabula ukuyisebenzisa uma bekungekho izinto ezimbili:
Ilula kakhulu ekunambithekeni kwami, futhi angibhekisi kusixhumi esibonakalayo, kepha amathuluzi ayo.
Kususelwa ku- I-GTK futhi usebenzise izinto kusuka I-Gnome.
Kepha ngenhlanhla kimi KDE Kuyimvelo yedeskithophu enziwa ngezifiso kakhulu, ngakho-ke ngiyakwazi ukuyenza ibukeke ifana ncamashi ne- i-eOS ngakho-ke ngibulala ukunxanela kwami. Ngikukhombisa ukuthi kungaba ngaphezulu noma ngaphansi, kuhluka eminye imininingwane ngokuya ngokuthanda ngakunye:
Asikwenze. Wonke amafayela esiwadingayo, ngiwabeke kwifayela elilodwa elicindezelwe futhi ungalilanda kulesi sixhumanisi:
Ukuphela kokufanele sikwenze ukuyivula uziphu bese ulandela imiyalo engezansi.
Lo mbhalo uzoba ekuguqukeni okuqhubekayo
1 Itimu ye-Plasma
2 I-Window Decorator
3 Isikimu Sombala Nesitayela Esibukwayo
5 Ukubukeka kwezicelo ze-GTK
6 Isithonjana setimu
7 Ukulungisa amapaneli kuDeskithophu
Ngengqikithi ye-plasma esinayo eyodwa ebizwa Elementary kudalwe ngu i-lgsalvati. Ngenhlanhla, bangasebenzisa noma iyiphi itimu yePlasma eyenziwe nguye. Ayicwebezelwanga ngendlela engingathanda ngayo kodwa iyasebenza, futhi sizoba nephaneli enhle emnyama.
Ukwenza imvelo yethu ibukeke i-eOS, kufanele sithole ingqikithi yePlasma esiyithandayo futhi eyenza iphaneli libe mnyama ngangokunokwenzeka.
Ukuyifaka sivula ifayili ku-zip i-plasma eyisisekelo.tar.gz bese siyikopisha kufolda /home/tu_usuario/.kde/share/apps/desktoptheme/ o /home/tu_usuario/.kde4/share/apps/desktoptheme/.
Khumbula ukuthi ngokuya ngokusatshalaliswa igama lefolda liyashintsha futhi kungaba noma .kde4 noma nje .kde.
Manje kufanele nje siye Izintandokazi ze-KDE »Ukubukeka Kwendawo Yokusebenzela» Itimu yedeskithophu » bese sikhetha ingqikithi entsha.
Okwezinkinobho zewindi, ngidalele ingqikithi ye- I-Aurorae. Ezinye sezivele zikhona ku- kde-bheka.org, kodwa akekho noyedwa kubo owangikholisa, ngakho-ke ngazakhela eyami.
Ukuyifaka sivula ifayili ku-zip KDE_Elementary_Aurorae.tar.gz bese siyikopisha kufolda /home/tu_usuario/.kde/share/apps/aurorae/themes/ o /home/tu_usuario/.kde4/share/apps/aurorae/themes/. Uma ifolda ingekho, sizoyakha.
Manje kufanele nje siye Izintandokazi ze-KDE »Ukubukeka Kwendawo Yokusebenzela» Ukuhlobisa Iwindi » bese sikhetha ingqikithi entsha.
Ukuze ihlale ifana ne- i-eOS, chofoza inkinobho Lungiselela izinkinobho futhi sishiya nomfanekiso olandelayo:
Siyamukela futhi yilokho kuphela.
Isikimu Sombala Nesitayela Esibukwayo
Ukufeza umuzwa ofana kakhulu i-eOS, Ngikhethe ukusebenzisa I-QtCurve. Iphakheji iyatholakala kukho konke ukusatshalaliswa, ngakho-ke sayifaka ne- yethu Umphathi wephakheji.
Uma isifakiwe, kufanele nje siye ku- Izintandokazi ze-KDE »Ukubukeka Kohlelo Lokusebenza» Isitayela » bese sikhetha ukungena Isitayela sezinto zesithombe a I-QtCurve.
Manje ngaphambi kokusebenzisa ushintsho, sichofoza inkinobho ethi Setha… futhi sithola iwindi elinje:
Sichofoza ku Ngenisa futhi sibheka ifayela OSX_Elementary.qtcurve. Sichofoza inkinobho ukwamukela futhi yilokho
Manje sekuyithuba le- Imibala yewindi, amafonti, nezinye izinto, ukuze umphetho nezinhlelo zokusebenza kudlalwe. Siya ku- Izintandokazi ze-KDE »Ukubukeka Kohlelo Lokusebenza» Imibala » bese uchofoza inkinobho Isikimu sokungenisa.
Sikhetha ifayela Imibala ye-OSX_Elementary ukuthi sisanda kuvula uziphu bese uchofoza inkinobho ukwamukela.
Ukuze imithombo ku KDE kubukeka kufana nalezo ze- i-eOS kumele sibe nemithombo efakwe ohlelweni I-Droid sans.
Siya ku- Izintandokazi ze-KDE »Ukubukeka Kohlelo Lokusebenza» Amafonti » bese uchofoza inkinobho Faka wonke amafonti. Siyakhetha I-Droid sans, enobukhulu be- 9,0 bese sichofoza inkinobho ukwamukela.
Ukubukeka kwezicelo ze-GTK
Ukulungiselela ukubukeka kwefayela le- Izicelo ze-GTK kumele sifake iphakheji kde-gtk-config. Ngaphezu kwalokho, kufanele futhi sibe nezinjini ezihambisanayo ezifakiwe.
Endabeni I-Arch Linux kubizwa: umoya-mpilo-gtk2, umoya-mpilo-gtk3 y qtcurve-gtk2. Endabeni ye Debian kubizwa: gtk2-izinjini-oxygen, gtk3-izinjini-oxygen, gtk2-izinjini-qtcurve.
Siya ku- Izintandokazi ze-KDE »Ukubukeka Kohlelo Lokusebenza» GTK » futhi sikushiya ngale ndlela:
Endabeni Ifonti Ngisebenzisa iya ngosayizi we 12px, kepha isengasetshenziswa I-Droid sans ngosayizi we 10 okungcono.
Ngenhlanhla yethu, sekuvele kunengqikithi yesithonjana ebizwa Isisekelo se-KDE, futhi yize ingaphelele noma ivuselelwe ngendlela engingathanda ngayo, okungenani ifeza umsebenzi wayo.
Ngendlela efanayo, ngingeze ezinye izinguquko, njengamafolda amasha esethi yezithonjana ze i-eOS.
Ukuyifaka sivula ifayili ku-zip okuyisisekelo.7z bese siyikopisha kufolda /home/tu_usuario/.kde/share/icons/ o /home/tu_usuario/.kde4/share/icons/. Uma ifolda ingekho, bayayakha.
Siya ku- Izintandokazi ze-KDE »Ukubukeka Kohlelo Lokusebenza» Izithonjana » futhi siyabakhetha.
Ukulungisa amapaneli kuDeskithophu
Manje kufanele senze izinguquko ezimbalwa kudeskithophu. Into yokuqala ukuhambisa iphaneli elingezansi liye phezulu. Ngicabanga ukuthi wonke umsebenzisi we-KDE uyazi ukuthi angakwenza kanjani, kepha uma kwenzeka kwenzeka, okufanele sikwenze yile:
Qhafaza kwesokudla kuphaneli »Vula izakhi zemifanekiso» Qhafaza kwesokudla kuphaneli futhi »Izinketho zephaneli» Okuncamelayo kwephaneli bese uhudulela iphaneli phezulu ngokubamba inkinobho Umphetho wesikrini ngesikhombisi.
Manje nge Izici Zemifanekiso Zivuliwe, sisusa kuphaneli eliphezulu ifayili le- Umphathi Womsebenzi. Sihambisa i- Ithreyi Yesistimu ngohlangothi lwangakwesokudla lwephaneli, bese ufaka ama-standoffs amabili ezinhlangothini zombili zePlasmoid ye Idethi nesikhathi, ukuze sibe phakathi nendawo.
Kufanele kube ngale ndlela:
Sinezinto ezimbili kuphela okufanele sizenze:
Angikayitholi indlela yokwenza usuku nesikhathi kubukeke kuvundlile hhayi okunye ngaphezulu kokunye. Uma kukhona owaziyo ukuthi angakwenza kanjani, ngicela ungitshele ukuthi ngivuselele le ndatshana.
Angikwazi futhi ukuthola indlela yokushintsha isithonjana semenyu KDE bese ubeka igama Apps o Aplicaciones. Ngizamile ukwenza i- .PNG ngombhalo kodwa awungifaneli.
Yimininingwane emibili emincane kepha uma ngingawaxazulula, lesi sifundo sizoba ngcono kakhulu.
Okwezimpawu I-Tray Yesistimu Singazisebenzisa ezizenzekelayo, noma ngizozinika umsebenzi wokufuna ezinye ezifana kakhulu noma ezilingana nalezo i-eOS.
Lapho sesiqedile ngephaneli ephezulu, lapho-ke kufanele sifake ifayela le- Nokho,. Noma kunjalo Iplanki, I-AWN, ICairo-DockSinezinye izindlela eziningi, ukhetha leyo oyifunayo.
Kepha kimi, engikwenzayo ukusebenzisa iphaneli lesibili KDE, ngoba igcwalisa umsebenzi we Nokho, ngokuphelele. Senza futhi Qhafaza kwesokudla endaweni yephaneli ephezulu »Izinketho zePhaneli» Faka Iphaneli »Iphaneli engenalutho.
Okubi ngokusebenzisa ipaneli ukuthi ngeke sikwazi ukushintsha isizinda sayo kalula, ngoba ithola leyo esungulwe kutimu yePlasma
Qhafaza kwesokudla kuphaneli entsha »Faka izinto zemifanekiso» Iziphathi zomsebenzi kuphela izithonjana. Ngalokhu sizoba nephaneli efana ne- Unity o Windows 7, lapho izinhlelo ezivulekile zikhombisa kuphela izithonjana zazo hhayi igama lewindi.
Enye inzuzo ukuthi lapho sivula uhlelo lokusebenza, sichofoza ngakwesokudla kwisithonjana bese simaka inketho Khombisa isiqalisi uma ungasebenzi. Ngale ndlela isithonjana sihlala sihlala kuphaneli futhi kulula ukwethula uhlelo. Kumele nje sivule izinhlelo zokusebenza esifuna ukuvela eDock, futhi siyazilungisa.
Uma lokhu sekwenziwe, sibuyela kokuncamelayo kwephaneli bese sisebenzisa isilayida sinciphisa ubukhulu baso ukuze singabi isihenqo esigcwele.
Sibuyela kokuncamelayo kwephaneli futhi kunkinobho yezinketho eziningi, kufanele simake: IWindows ingamboza bese uqondanisa iphaneli ne isikhungo.
Cishe sesikulungele konke. Sisalelwe yini? Kucace kahle ukuthi iphepha lodonga. Ngenhlanhla abafana be i-eOS Bayasivumela ukuthi silande izimali ezisemthethweni kusixhumanisi esilandelayo:
Landa amaphephadonga eOS
Kepha ngaphakathi kwefayela elicindezelwe ngibashiyile ingemuva eliza ngokuzenzakalela ku- i-eOSngakho-ke kufanele basebenzise leyo uma befuna.
Ngishiya izinto ezimbalwa zisalindile. Singasebenzisa ingqikithi ye- Plymouth de i-eOS Okokuthi ama-PC boot, kepha hhayi wonke umuntu usebenzisa Plymouth. Ngakho-ke lokhu kukuwe.
Olunye udaba olulindile ukusebenzisa inkinga efanayo ku- Umphathi weseshini. KDE usa I-KDM yize ingafakwa ngokuphelele I-LightDM futhi ngokubekezela nangekhono elincane, sebenzisa ingqikithi efanayo ye- i-eOS. Ngikwenze lokhu esikhathini esithile esidlule futhi angifuni ukubeka engcupheni.
Ngiyakuqonda lokho ku I-Arch Linux kungenziwa kalula, kepha njengamanje angifuni ukwephula ukufaka kwami ​​ngakho anginankinga ngokusebenzisa ingqikithi I-KDM bonito.
Ngifuna futhi ukudala itimu enezithonjana ezifana kakhulu nalezo ze- i-eOS yetreyi le-KDE. Kepha ungakhathazeki, njengoba ngifeza lokhu ngizokuvuselela okuthunyelwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Okokufundisa: Isitayela se-KDE Elementary OS
Amazwana ayi-39, shiya okwakho
Ngibona kakhulu! Into embi kimi nge-OS eyisisekelo, ngaphezu kwalokhu okungenhla, ukuthi inomjikelezo omude kakhulu wokuthuthuka. Kube ku-beta xD cishe iminyaka engu-2. Ngenhla manje kubonakala sengathi ikusasa lingaphezulu kwe-qt kune-gtk
Empeleni, iqiniso lokuthi iku-beta akukubi kangako, ngoba labo abayisebenzisayo bathola izibuyekezo eziqhubekayo ... kepha uma udinga ukusebenza ngempela, ilula kakhulu, ikakhulukazi kuzinhlelo zokusebenza.
Ibhonasi, ngiyisebenzisa nsuku zonke, njengoba u-Elav esisho ngaso sonke isikhathi ukuthi kukhona izibuyekezo futhi kuzinzile kakhulu, angibanga nankinga kusukela ngiyisebenzise izinyanga, akukho hang, close, noma ukuqala kabusha, lutho.
I-qty gtk bayayixoxa, kepha kungenxa yokulandela ubuntu nge-xMir noma enye i-distros
Kufanele benze Elementary kune-KDE. Kungaba iphupho eligcwaliseka * _ *
Ungasebenzisa futhi itimu yesithonjana ebizwa nge-Elementary USU
Kunjalo. Yize i-Elementary USU iphelelwe yisikhathi. Izithonjana ezintsha kufanele zengezwe 🙂
Bengizoshintshela ku-KDE ukube kuya ngami ukuthi ayizisebenzisi ezinye izinsizakusebenza eziningi ... Okwamanje ngijabule ukusebenzisa i-XFCE ku-Linux Mint
"Izinsizakusebenza eziningi" ?? zingaki i-600 MB? unayo ngaphansi kwe-1GB ye-RAM? uma kunjalo ngiyakudabukela.
Uma i-elementary yayiku-beta ngoba yayisebenzisa ubuchwepheshe obusha be-gnome, ngingaqonda… kepha bahlala ku-beta futhi kususelwa kunguqulo ye-gnome eqhubeka iphelelwa yisikhathi.
Siyabonga ngokufundisa; Ngisebenzise ukuguqulwa okuningi nokunye ngesitayela sami, lokho kuyinto enhle nge-KDE desktop.
Ngiyabonga, ngiyajabula ukuthi ikusizile.
Inothi echazayo: Elementary isuselwa ku-12.04
Uqinisile impela, sengivele ngalungisa. Ngiyabonga
I-post elav enhle, ngiyayithanda i-KDE futhi uma ngingayisebenzisi manje kungenxa yenkinga yezinsizakusebenza, kepha-ke ngithemba ukubuyela kulobu buhle kungekudala.
Ngiyabonga .. 🙂
Okuthunyelwe okuhle 😀
Ngizobeka iPlymouth kuyo bese ngibheka ukuthi ngiyayenzela yini i-Slim theme (angiyisebenzisi i-KDM hehe) ... sekuyisikhathi sokushintsha kakhulu ilaptop yami 🙂
Kuyamangaza ukuthi bangaki abasebenzisi abaguqula i-KDE ngendlela engaziwa futhi epholile, ngiyazama futhi njalo ngibuyela kufomethi ezenzakalelayo ye-KDE 😀
Yebo, lokho kuvame ukwenzeka. Empeleni ushintsho aluzange lwenziwe esimisweni sami kepha luhlolwe 🙂
@Elav konke lokhu kungazenzekela ku-bash, kungani ungajabuli bese uqala iphrojekthi e-github?
Bona okwami ​​ukufaka iW Wheezy + KDE, ungenza eyodwa ukulungisa i-KDE futhi izosebenza kunoma iyiphi i-distro.
Noma nini lapho ungiphakamisa ngikutshela into efanayo: Ngeshwa angikwazi ukusebenzisa iGithub, noma enye indawo yalolu hlobo engicela okhiye bami be-SSH bomphakathi noma abazimele, ngoba i-ISP yami ayingivumeli ngixhume.
Njengaziphi izinkinobho zomphakathi? Awukwazi ngisho nokulanda okuthile?
Yebo yebo, ngiyakwazi ukulanda, kepha angikwazi ukwenza 😛
Zama ukungeza lokhu kufayela lakho le-
umthetho olandelwayo = https
Siyabonga ngokwabelana, kodwa bekuyinto embi.
Sisebenzisa itimu, othile uyazi ukuthi angabeka kanjani igama lomsebenzisi ekhoneni eliphezulu kwesokudla njenge-gnome nobunye ... ku-KDE
Lokhu kusetshenziswa i-conky nanoma imuphi umyalo obuyisa igama lomsebenzisi
Uma ungakhathazeki ukukwenza kube okuncane, nansi: Sebenzisa i-cashew. Ngena emisebenzini bese ushintsha igama lalowo olisebenzisa njalo. Yilokho 😛
Kuhle kakhulu, okuwukuphela kwento ebingangisebenzeli bekuwumhlobisi wamawindi, ngiwunamathisele kufolda, kepha awuzange uvele kokuncamelayo, ngafaka eyodwa ebizwa nge-ElementaryLuna nguGarthecho futhi kwabukeka kukuhle, 😀, ngiyabonga kakhulu okuningi okokufundisa, ngizokuvakashela ngezikhathi ezithile ukubona ukuthi yiziphi izinguquko ozenzayo 🙂
Elav, omkhulu !!
Ngizokugcina engqondweni. Ukubingelela nokubonga.
Ngikwazile ukubeka isikhathi nosuku ohlangothini lwesokudla kuphaneli eliphezulu ^^, yize ngikwenze sekwephuze kakhulu ngicabanga ukuthi ngu-2: 27 am. lapha: '(kuzofanele udlale ngosayizi wepaneli futhi yilokho kuphela, ukuyinciphisa kancane kuseduze kwayo.
Ngiyethemba ngisizile kancane 🙂
Umhlahlandlela wakho ungisizile ngashiya i-PC yami kahle kakhulu!
Itimu yedeskithophu ngasizathu simbe uma ngiyifaka ingishiya nohlu lwamawindi anombhalo ofiphele kakhulu futhi ayikwazi ukufundwa kahle, ngakhetha ukusebenzisa i- "Elegance" okwamanje.
UJoaco Ej kusho
Sawubona, kuhle kakhulu, ngithanda ukwenza izinto ezimbalwa ku-KDE, kepha angazi ukuthi kuzokwenzeka yini.
- Ngingathanda imenyu yezithonjana zethreyi ibe nesitayela esifana naleso se-Elementary ne-Gnome 3, okungukuthi, esifana naleso somugqa wamahlaya, esikhundleni sokuba isikwele sonke.
- Ngingathanda ukukunikeza indlela yokushintsha ama-desktops asuka kumabanga aphansi abe yi-KDE
Ngabe ucabanga ukuthi ungakwazi?
Phendula u-Joaco Ej
Sawubona !! kuhle, ngiyabonga kakhulu ... bengivele ngiwuqalile lo msebenzi wokuguqula i-kde ibe isitayela sokuqala futhi namhlanje ngibone lesi sifundo futhi ngipholisha okuningi kakhulu engangikugqokile. Bengingazi nge-qtcurve 😀
Izixhumanisi ziphansi, ngicela ungaphinda uzilayishe. Mayelana
Isixhumanisi http://www.desdelinux.net/ftp/KDE_Elementary.7z Iphukile, ngicela ungayilungisa?
Cesar Okubanjo placeholder image kusho
Isixhumanisi sokulanda asisasebenzi.
Phendula uCesar Callejas
Ukwazi itimu entsha ye-Wordpress 3.6
Indawo yokugcina yendawo enamaphakeji we-AUR (i-Arch Linux)